ကျွန်မခံစားချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျွန်မခံစားချက်
Posted by Khaing Khaing on Jun 14, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 39 comments
ကျွန်မလည်း ခံစားတတ်ပါတယ် ....
ကျွန်မက မန်းလေးမှာနေတာပါ ……..
ငါဒီနေရာကနေ တစ်ခြားနေရာတစ်ခုကို သွားချင်လိုက်တာ …..
ဟော … ဟိုမှာ ငါလိုက်လို့ရမယ့် သူတစ်ယောက် ငါသူနဲ့လိုက်သွားမယ် ….
ဟင် …. အသံတွေကို ငါကြားနေတယ် နေရာသစ်ပဲ ဒါပေမယ့် ငါဘာမှ မမြင်ရဘူး ….
ငါကြားနေတဲ့ အသံရှင်တွေကို မြင်ဖူးချင်လိုက်တာ …. မရတော့ ဘူးကွာ … ငါသူတို့ကို အရမ်းတွေ့ချင်တယ် … ငါအတင်းရုန်းထွက်လိုက်မယ် … ဟော … ငါအသံတွေရော … လူတွေရောမြင်ရပီ … ဒါပေမယ့် ဒီအသံရှင်တွေကို ငါမရင်းနှီးဘူး ငါရင်းနှီးတဲ့ အသံရှင်တွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ပီလဲ ….
အာ …. ငါဗိုက်ဆာတယ်ကွာ … ငါ့ကို ဘယ်သူမှလည်း ဘာမှ မကျွေးကြပါလား ….
ဟာ … ငါကြားနေကြအသံရှင်တစ်ယောက်တော့ တွေ့ပီ …
အံမယ် သူက ငါ့ကို အစာတွေကြွေးတယ်ဟ ….
ငါ သိပ်မျှော်လင့်နေတဲ့အသံရှင်နောက်တစ်ယောက်ကျန်သေးတယ် …. သူက ငါ့ကိုဆို အမြဲစကားလာလာပြောနေတာ ခုသူဘယ်ရောက်နေလဲ မိုးလည်းချုပ်ပီ သူ့ကိုငါဘယ်လို ရှာရမလဲ ဘယ်အချိန်မှ သူနဲ့တွေ့မလဲ …. သိပ်မကြာပါ … ညနေစောင်မှာ ကျွန်မ သိပ်ကြားချင်တဲ့ အသံရှင်ရောက်လာပါတယ် … ကျွန်မအရမ်းဝမ်းသာသွားမိတယ် …. သူလည်း ကျွန်မကို တွေ့တော့ သိပ်ဝမ်းသာတယ် …
ဒီလိုနဲ့ကျွန်မကို အစာကျွေးတဲ့အသံရှင်ရယ် အမြဲတမ်းစကားလာပြောနေတဲ့ အသံရှင်ရယ် ပျော်ရွှင်စွာနေနေကြတယ် … ကျွန်မစိတ်ထဲ လိုနေတာတစ်ခုရှိတယ် …
ကျွန်မကို ဒီလောကထဲရောက်အောင် ပို့ဆောင်ပေးသူနောက်တစ်ယောက် သူ … သူကကော ….
ဒီလိုမျှော်လင့်ရင် တစ်နေ့မှာတော့ ကျွန်မကို အစာကျွေးတဲ့ အသံရှင်ရုတ်တရက်ပျောက်သွားတယ် … ကျွန်မအရမ်းဝမ်းနည်းတယ် … စိတ်လည်းတိုမိတယ် … အဲဒီအသံရှင်ဘယ်ရောက်သွားလဲ … သူက ကျွန်မနဲ့တကယ့်အရင်းနှီးဆုံးသူ အရင်ကဆို သူနဲ့ကျွန်မပိုပြီးအနီးကပ်နေရတယ် … သူဘယ်သွားသွား ကျွန်မပါတယ် ….. ခုတော့ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း ကျွန်မကို လာကျွေးတဲ့အစာတွေက မနူးညံ့တော့ဘူး … အရသာကလည်း မကောင်းဘူး … ကျွန်မအရမ်းမုန်းတယ် …. ကျွန်မနဲ့အရင်းနှီးဆုံးအသံရှင် ကျွန်မမျှော်နေတယ် ….. သိပ်မကြာပါဘူး … ညနေစောင်းတော့ နူးညံ့တဲ့ အစားအသောက်တွေကျွေးရင် သူကျွန်မဆီရောက်လာတယ် … အဲဒါ ကျွန်မ မေမေ ပေ့ါ ………
သမီးငယ်လေးကို သတိရလို့ သူ့ဘက်ကခံစားချက်ကို ပို့စ်အဖြစ်တင်လိုက်တာပါ …….
သမီးကြီးတုံးကလည်း သူဒီလိုပဲ ခံစားခဲ့ရတာပါ …..
ကြုံတုန်း ဝင်ကြွားတာ ဟီးး
အမ် …. ဘာလုပ်ရမှာဒုန်း …… သားရှင်တွေနှင့် အရောတ၀င်မနေပါ ….
သမီးငယ်လေးကို (05.04.2013) ရက်နေ့က မွေးဖွားပါသည် … ကလေးရောမိခင်ပါ ကျန်းမာပါသည် … 03.06.2013 မှစတင်ရုံးတက်ပြီး ဂေဇက်ကိုပြန်ဝင်ပါသည် … ယခုအချိန်တွင် ဦးနှောက်က သားရေးသမီးရေးတွေ အရမ်းရှုပ်ထွေးနေပါသောကြောင့် …….. စာတွေတော့ များများမဖတ်ဖြစ်သေးပါ ….
မွေးကင်းစ သမီးလေးနေရာက ခံစားပြီး ရေးထားတယ်ထင်ပါ့။
ရွာပွဲမှာ နောက်တိုးမန်ဘာသစ်လေးလို့ စာရင်းမှတ်ထားလိုက်မယ်နောာာာာာာာာ :hee:
ဟုတ်ပါတယ် … မမ … သမီးငယ်လေးနေရာက ခံစားရေးထားတာပါ …. သူက နို့ဘူးမစို့ဘူး … အမေ့ကိုပဲ စောင့်နေတာ … သူမွေးပြီးကတည်းက သူ့အမကို သိတယ် … သူ့အမအသံကြားရင် သူက လိုက်ကြည့်တယ် … ဒါတွေကို ပို့စ်လုပ်တင်ထားတာပါ ……
မိသာစုအားလုံး ကိုယ်ကျမ်းမာ စိတ်ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်တယ်နော်။။
ကျေးဇူးပါ …မမမွန်ကစ် …. မမရော နေကောင်းတယ်မှတ်လား ……
မတွေ့တာကြာပီ …. သမီးလေးပဲပေါ့နော် ..
သမီးဆိုတော့ အမေ ရဲ့ အရိပ်လေးတွေပေါ့ ..
ကလေးရော လူကြီးပါ ကျမ်းမာပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ..
အမေရဲ့အရိပ်ဆိုဒါထက် … အမေလိုပဲ တစ်နေ့မိခင်နေရာရောက်ရင် အမေလို ဒုက္ခခံရမှာ … အဲဒါတွေတွေး ပူနေမိတယ် …….
နူးညံ့တဲ့ အစားအသောက်တွေကို ခိုင်ခိုင်က ရေခဲသေတ္တာထဲမှာထားပေးခဲ့လို့ရတယ်လေ
အဲဒီလိုထားဖို့ မရှိတော့ဘူး မမနိုဗီရဲ့ … သူကညဘက်ရော မနက်မိုးလင်းမှာပါ အ၀စားထားတာလေ … မနည်းကို စုနေရတယ် … မိုးလင်ရင်ကုန်ပီ … ဟိုတစ်လောကထားခဲ့တယ် … သူက နေ့ခင်း (၁၂) နာရီမှာနိုးတော့ အမေက စိတ်မသန့်လို့ မတိုက်တော့ဘူးတဲ့ ……
မီးပုံးပျံ နောက်တစ်လုံး အောင်မြင်စွာ လွှတ်တင်လိုက်ပြီပေါ့လေ
၀မ်းသာနေရုံနဲ့မပီးဘူး ကပေရေ … ကိုယ်တိုင်လည်း သူများလို မီးပုံးပျံ လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါအုံးတော် ….
ရွာထဲမှာ ပြန်တွေ့ရလို့ ၀မ်းသာပါတယ် ညီမရေ။
ခုလောက်ဆို ခလေးဝေယျာဝိစ္စတွေနဲ့ မောနေပြီပေါ့နော်။
ဆရာမရေ …. နေကောင်းပါတယ် ….. ဆရာမကလေးရော ဘယ်နှစ်လရှိပီလဲ … နေကောင်းပါတယ်နော် ကလေးရော လူကြီးပါ …….
သမီးရှင်ဆိုတော့ မာမာဘဲပေါ့အေ……. ဟွင်းဟွင်း…
ဟဲ့ … အပုမ မာမာမဟုတ်ဘူး … ခိုင်ခိုင်အေ့ …ညည်းကောဘာလေးမွေးမှာဒုန်း …… သားလေးဆို ငါနဲ့လာခေါ်နဲ့ …… ဒါပဲ ……
သင်၏ခံစားချက်ဖြင့်ရေးဖွဲ့ခြင်းတွင် မေတ္တာအရိပ်များလွှမ်းလေသောအခါ အေးမြဖွယ်ရာမိသားစုအဖြစ် ရှိပါစေသောဝ်။
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေသော် …. လေးလေးခ
မတွေ့ဒါတောင် ကျာဘီ …
တားဂ လွမ်းနေဒါ …
မာမီ .. နေကောင်းလား …
တာမီးလေးဒွေရော နေကောင်းလားဟင်င် …
မောင်မောင်အံ … မာမီ မာမီနဲ့ ဘာမှလည်း မသိတတ်ဘူး … ယောက္ခမရှိခိုး သွားမကျိုးဒဲ့ … မှတ်ထား ….
အလုပ်တောင်ပြန်တက်နေပြီပေါ့အစ်မ… အစ်မရဲ့သမီးလေးကို အစ်မထက်ပိုအတွေ့အကြုံများတဲ့အမေ ကြည့်ပေးနိုင်ကပဲအစ်မအရမ်းကံကောင်းပါတယ်… သမီးနှစ်ယောက်ဆိုတော့ အမေအားကိုးရမှာပါ..
အခုလောလောဆယ်တော့ ပျာယာတွေခတ်နေတာပဲ …….. အကြီးမလေးကတော့ နည်းနည်းအားကိုးရတယ် ….
မမပဒုမ္မာရေ … မမပို့စ်ထဲမှာ ပြောပြီးပြီနော် …….
အဲ ခလေးငယ် သေးသေးလေးတစ်ယောက် ရဲ့
ဖတ် ရတာ တမျိုး လေး
ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက ရော
ဒါမျိုး ပဲ လားးးးး
ကျွန်တော့် ခံစားချက် . . . . . . .
ပြန်မတွေးနဲ့ … ငယ်ငယ်က ရူးရူးတွေပေါက်ချ အီးအီးတွေ ဒီအတိုင်းပါချနဲ့ … တစ်ခါတစ်လေ အမေက မလုပ်နိုင်သေးရင် အီးအီးတွေကို လက်နဲ့ကောက်စား ဒါတွေလုပ်ခဲ့တယ် ……….
ဂဇက်မှာ မတွေ့တာကြာလို့ လွမ်းနေခဲ့တာ…
စိတ်တွေကတော့ အခုလောလောဆယ် ကဆင့်ကလျားဖြစ်နေတာ …. ဘယ်လိုပြောရမလဲ …….
သမီးလေး ရဲ့ စိတ်ကို အငှါး ခံစားထားတာလေးပါလား::::
ကိုယ့်သမီးလေး အတွက် ထားတဲ့
နောက်အလျင်းသင့်ရင်တင်ဦးမှာပါ … အခုတော့ သမီးငယ်ထက် သမီးကြီးလေးကို သနားမိတယ် ……
ဘဏ်နားရက် … ငွေထုတ်ဖို့ခက် …. ရေစုပ်စက် … ၀ယ်ဖို့အတွက် … ဒါပေမယ့် … မီးမလာလို့ခက် ….
ယောင်းမ….နေကောင်းတယ်မို့လား..မတွေ့တာတောင်ကြာပီ… သမီးနှစ်ယောက်နဲ့ အလုပ်တွေ များနေတယ်ဟုတ်…
ကောင်းပ … ယောင်းမရေ ………. တွေ့ကြမယ်လေ …..
အဟီ မမခိုင် ပိုစ့်လေး ဖတ်ပြီးးး ဟိုဘက်က ငါးစိမ်းသည် ဗားးရှင်းးပိုစ့် မှာသွားပြီးးး သတိရမိတယ် တန်းတူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပီးတော့ပေါ့့အတွေးးးများးးစွာာာဖြင့့့်